Maxaa ka jira in Madaxweyne Xassan Sheekh kala dirayo baarlamaanka ? | dhanaanmedia.com
Maxaa ka jira in Madaxweyne Xassan Sheekh kala dirayo baarlamaanka ?
August 25, 2015 // D M5 // News3904 Views
Madaxweynaha dowladda federaalka Xasan Sheekh Maxamuud ayaa la sheegey in uu ka fikirayo kaladirista baarlamaanka fadhiidka ah oo dhawaan ka keeney mooshin isaga xilka looga qaadayo. Inkasta oo la sheegayo in qolyaha baarlamaanka ay meesha ka sareen qodobki madaxweynaha awooda u siinayay arinkan ayaa hadana waxaa dhanka kale la sheegayaa in madaxweynaha awood u leeyahay cuskashada dastuurki hore ee dalka, maadaama dastuurkan hadda jira uu yahay ku meel gaar.
Dhanka kale, mooshinka laga gudbiyey madaxweynaha ayaa la sheegay in uu sugayo inta ay ka fariisanayaan koox loogu yeeray guddi garsoor oo ka kooban 4 xubnood. 2 uu baarlamaanka fadhiidka ah soo xulayo, iyo 2 xukuumadda soo xuleyso. Sidoo kale, 5 xubnood oo lagu sheegay golaha addeega garsoorka oo uu guddoomin doono nin lagu magacaabo Caydiid Ilka Xanaf, oo Dowladda fedraalka Muqdisho ugu magacaaban guddoomiyaha maxkamadda sare.
Xassan Sheekh ayaa la sheegey in uu aad uga baqdin qabo Caydiid Ilka Xanaf oo ay horey isugu dhaceen, balse dadka qaarkood ay sheegayaan in Xassan awood u leeyahay qancintiisa.
Xildhibaanada fadhidka ah ayaa lagu soo waramayaa in ay ku adkeysanayaan meelmarinta mooshinka, waxayna aaminsan yihiin in ay heystaan fursado badan oo ay xassan xilka uga xayuubin karaan, amaba ugu yaran ay ku heli karaa laaluush badan. http://dhanaanmedia.com/wp-content/uploads/2015/08/Xildhibaan-Goodax-Barre-Oo-madaxeyne-Xassan-xagxagtat.mp3
Isku soo xooriyoo hadii uu Xassan dhaco, Ra’isulwasaaraha iyo xukuumadiisa ayaa Dowladda federaalka gaarsiin doona sanadka 2016, xilligaas oo la filayo in dalka uu yeelan doono madaxweyne Cusub iyo xukuumad iyo baarlamaan soomaaliyeed oo taya leh.